Kanji-n’ny Taona 2012 ho an’i Japana · Global Voices teny Malagasy
Kanji-n'ny Taona 2012 ho an'i Japana	Voadika ny 02 Janoary 2013 2:08 GMT
Zarao: kanji -n'ny volamena, tononina hoe “kin” amin'ny fiteny Japoney
Ny “volamena” no Kanji tamin'iny taona iny (金). (Kanji: singa ankoatry ny hiraganas sy katakanas manome ny endri-tsoratra Japoney)
Ny Japan Kanji Aptitude Testing Foundation dia nanambara [ja] tao amin'ny tempoly Kiyomizu-dera tamin'ny 12 Desambra 2012 fa ny kanji tamin'ny taona 2012 dia ny volamena (金). Nanomboka tamin'ny taona 2000 ny fanambaràna ny Kanji isan-taona ary nahasarika ny sain'ny vahoaka isan-taona.
Nanazava ny Japan Kanji Aptitude Testing Foundation fa nofidian-dry zareo ity kanji ity hanehoana “tranga miavaka” tratra tamin'io taona io (soratana hoe 金字塔), toy ny medaly volamena ho an'i Japana (金メダル) tany amin'ny Olaimpika Londona 2012, Loka Nobel iray azon'i Dr. Yamanaka, ilay tranobe manaka-danitra vaovao ‘Skytree’ ao Tokyo, ary ny tako-masoandro (金環日食) hita nanerana an'i Japana.
Fanehoan-kevitr'ireo Mpisera anaty aterineto
Maro no nanafantoka ny sainy tamin'ilay fanambaràna momba ny kanji, saingy tsy resy lahatra ireo mpisera anaty aterineto fa hoe ity taona 2012 ity dia namirapiratan'ny volamena tokoa. @keloinwell, mpampiasa Twitter dia nampiaka-tsoroka mihitsy, satria ny kanji dia midika ihany koa ho “vola” amin'ny fiteny Japoney.
sarin'ilay skytree. Sary nalain'i AxlBohya
Tsy dia mandresy lahatra ahy loatra ny volamena. [Manontany tena aho hoe nahoana ry] zareo no nifidy 金 fa tsy 金字塔.
Tsy dia ao tsara ny fahenoako ny kanji tamin'ity taona ity. Takatro ihany raha ny hoe avy amin'ireo medaly volamena no nihaviany, saingy tsy maneno tsara amiko raha toa ka resaka zava-nisongadina (金字塔).
Ny sasany tamin'ireo mpampiasa twitter dia naneho hevitra tamim-bazivazy, nanondroana an'i Kim Jong-un izay soratana hoe 金正恩 amin'ny Kanji [ny kanji “volamena” dia mivoaka ao anatin'io soratra io].
Nambara ho ny “volamena” (金) no kanji-n'ny taona, andro mitovy amin'ny nandefasan'ny Korea Avaratra bala afomanga.
Avelao Ny Robots No Hamehy Ny Taona Anaty Vazivazy
kanji nosintonin'ny Global Voices Japoney an-kianjoanjo ny “hip” na “waist” nifanaraka tamin'ny tolotra mpanao vazivazy Shindanmaker. Tsy misy dikany? Ka efa hoe vazivazy.
Nanao tranonkala iray mpanome tolotra vazivazy ny mpampiasa iray ShindanMaker izay manome avy hatrany amin'ny fomba mandeha hoazy “ny kanji-nao ho an'ny taona [ja]”. Ireo rehetra mpampiasa twitter dia afaka mahita izay sintonin'ilay tranonkala ho azy ireo, mifanaraka amin'ny anarana mpampiasa naiditra. Ilay tranokala koa dia mamorona “tatitra iray momba ny haavon'ny fahafaham-ponao eo amin'ny tena fiainanao [ja] ” ary “vina ho an'ny faran'ny taona/taom-baovaonao [ja]”.
Global Voices Lingua Japoney taona 2012
Nanao ahoana ny taona 2012 ho anao? Nanao fihaonana in-telo ny tarika Global Voices Lingua Japoney [ja] tamin'ny taona 2012. Navitrika tokoa ny fifandraisana tamin'ny alàlan'ny mailaka teo amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo Lingua, saingy ho an'ny maro tamin'ireo mpikambana vaovao dia fotoana voalohany ho azy ireo nifanatrehan-tava io. Miarahaba an'i Maiko Kamata , tonian-dahatsoratra vaovao ao amin'ny Lingua Japoney sy Keiko Tanaka, tonian'ny famoahana ho an'ny teny Japoney ny Global Voices. Amin'io taona hoavy io, miandrandra ny hamoaka tantara misimisy kokoa mikasika an'i Japana sy fandikàna lahatsoratra bebe kokoa ho an'ireo mpamaky Japoney ny tarika Global Voices Japoney .
Mirary fety sambatra sy taona vaovao ho anareo!
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraKeiko Tanaka
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 47 minitra izayShinaSivana Nihatra Taminà Sary Mahatsikaiky, Fikarohana Teny Sy Sary Momba Ny Matson'i Shina Ho An'ny Ady Lehibe Faharoa
4 andro izayJapanaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
4 andro izayShinaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, Français, English
HaisoratraHehyHevitraMediam-bahoakaZavakanto & Kolontsaina